वरिष्ठ पत्रकार पुष्करलाल श्रेष्ठको निधन - VOICE OF NEPAL
४ बैशाख २०७६, बुधबार ११:०० 80 ??? ???????
नेपाल समाचारपत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक पुष्करलाल श्रेष्ठको निधन भएको छ । श्रेष्ठको उपचारको क्रममा राजधानीको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा बुधबार बिहान ११ बजे ४९ मिनेटमा निधन भएको हो । श्रेष्ठको पार्थिव शरीर आज साढे १२ बजेदेखि भूगोल पार्कस्थित निवासमा राखिने छ भने आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिनेछ ।
करिब ५ महिनाअघि नाकमा समस्या देखिएका कारण उनको राजधानीको वयोधा अस्पतालमा नाक र त्यसलगत्तै ब्लुक्रसमा मृगौलाको पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उक्त शल्यक्रिया लगत्तै पत्रकार श्रेष्ठमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखापर्दै आएका थिए ।